के ईश्‍वर तपाईँको चासो राख्नुहुन्छ?
प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या ३ २०१८
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (सर्बिया) लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
“तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा बहुमूल्य छौ।”—मत्ति १०:३१.
सृष्टिबाट के सिक्न सक्छौँ?
भर्खरै जन्मेको बच्चाको लागि बाहिरको वातावरणसित घुलमिल हुन सुरुको ६० मिनेट एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन? किनभने आमाले त्यतिबेला आफ्नो नवजात शिशुलाई माया-ममता देखाइन्‌ भने शिशुको शारीरिक वृद्धि र विकासमा निकै उन्‍नति हुन्छ। *
भर्खरै जन्मेको बच्चालाई माया देखाउँदै हेरविचार गर्न आमालाई कुन कुराले उत्प्रेरित गर्छ? नवजात शिशुसम्बन्धी एउटा अङ्‌ग्रेजी पत्रिकामा (द जर्नल अफ पेरिन्याटल) प्राध्यापक जनेट क्रेन्सले अक्सिटोसिन हर्मोनको बढ्‌दो मात्राले गर्दा “आमा आफ्नो नवजात शिशुलाई छोएर, नियालेर र स्तनपान गराएर मातृस्नेह देखाउन उत्प्रेरित हुन्छिन्‌” भनेर बताइन्‌। साथै त्यो समयमा निस्कने अर्को हर्मोनले “आमालाई बच्चाको प्रतिक्रिया बुझेर त्यसअनुसार गर्न” र बच्चासित नजिक हुन मदत गर्छ। यो कुरा किन उल्लेखनीय छ?
हाम्रो मायालु सृष्टिकर्ता र ईश्‍वर यहोवाले * नै आमा र बच्चाबीच यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध सृष्टि गर्नुभएको हो। ईश्‍वरले आफूलाई “आमाको कोखबाट बाहिर” ल्याउनुभयो र आमाको छातीमा ढुक्क महसुस गराउनुभयो भनी प्राचीन इस्राएलका राजा दाउदले बताए। तिनले यस्तो प्रार्थना गरे: “म जन्मेदेखि नै तपाईँले मेरो ख्याल राख्नुभएको छ; म मेरी आमाको गर्भमा छँदादेखि नै तपाईँ मेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।”—भजन २२:९, १०.
विचार गर्नुहोस्‌: आमाले मायालु भई आफ्नो बच्चाको हेरविचार गरून्‌ र उसका आवश्‍यकताहरूको ख्याल राखून्‌ भनेर ईश्‍वरले यस्तो जटिल प्रणाली बनाउनुभयो। त्यसोभए के उहाँले पनि ‘आफ्नो सन्तान’ अर्थात्‌ हामीलाई चासो देखाउनुहुन्छ भन्‍नु तर्कसङ्‌गत छैन र?—प्रेषित १७:२९.
बाइबलले ईश्‍वरको मायालु हेरचाहबारे के सिकाउँछ?
सृष्टिकर्तालाई सबैभन्दा नजिकबाट चिन्‍नुभएको येसु ख्रिष्टले यसो भन्‍नुभयो: “के दुई वटा भँगेरा एक पैसामा बिक्दैन र? तैपनि तीमध्ये एउटा पनि तिमीहरूका बुबाले थाह नपाई भुईँमा झर्दैन। तर तिमीहरूको शिरको केशसमेत सबै गनिएका छन्‌। त्यसैले नडराओ, तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा बहुमूल्य छौ।”—मत्ति १०:२९-३१.
हामीमध्ये थोरैले मात्र उडिरहेका साना चराहरूलाई ध्यान दिन्छौँ। तीमध्ये कुनै भुईँमा झरेको त हामीलाई याद पनि हुँदैन। तर स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो ईश्‍वरले तिनीहरू हरेकलाई याद गर्नुहुन्छ! त्यसोभए उहाँको नजरमा के मानिस थुप्रै चराहरूभन्दा बहुमूल्य छैन त? पक्कै छ। त्यसैले ईश्‍वरले तपाईँको चासो राख्नुहुन्‍न भनेर ‘डराउनु’ वा शङ्‌का गर्नु पर्दैन। बरु उहाँ तपाईँको गहिरो चासो राख्नुहुन्छ भन्‍ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्‌!
ईश्‍वर हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ र हाम्रो ख्याल राखेर माया देखाउनुहुन्छ
धर्मशास्त्रले यस्तो आश्‍वासन दिन्छ:
“यहोवाको नजर सर्वत्र रहन्छ, असल र खराब दुवैलाई उहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ।”—हितोपदेश १५:३.
“धर्मीहरूमाथि यहोवाको नजर रहन्छ अनि तिनीहरूले उहाँलाई गुहार्दा उहाँले आफ्नो कान थाप्नुहुन्छ।”—भजन ३४:१५.
“तपाईँको अटल प्रेमको कारण म खुसीयाली मनाउनेछु किनकि तपाईँले मेरो दुःख देख्नुभएको छ; मेरो वेदना तपाईँलाई थाह छ।”—भजन ३१:७.
“यहोवाले मलाई माया नै गर्नुहुन्‍न . . . जस्तो लागेको थियो”
ईश्‍वर हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ र हाम्रो ख्याल राखेर माया देखाउनुहुन्छ भनेर थाह पाउँदा यसले हाम्रो जीवनमा पक्कै फरक पार्छ। कसरी? बेलायतकी हानालाई * विचार गर्नुहोस्‌। तिनी भन्छिन्‌:
“यहोवाले मलाई माया नै गर्नुहुन्‍न र मेरो प्रार्थनाको जवाफै दिनुहुन्‍न जस्तो पटक-पटक लागेको थियो। ममा नै विश्‍वासको कमी भएकोले यस्तो महसुस भएको होला भन्ठान्थेँ। उहाँको नजरमा म बेकामको मानिस भएकोले उहाँले सजाय दिँदै हुनुहुन्छ र बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोचेँ।”
तर यहोवाले चासो राख्नुहुन्छ र माया गर्नुहुन्छ भनेर हाना पछि ढुक्क भइन्‌। उनको सोचाइ कसरी परिवर्तन भयो? उनी भन्छिन्‌: “मेरो सोचाइमा बिस्तारै परिवर्तन आयो। येसुको फिरौतीको बलिदानबारे धेरै वर्षअघि दिइएको एउटा भाषण अझै सम्झन्छु। त्यस भाषणले मेरो मनमा गहिरो छाप पाऱ्‍यो अनि यहोवाले मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर विश्‍वस्त हुन सकेँ। प्रार्थनाहरूको जवाफ पाउँदा म आँसु थाम्नै सक्दिनँ किनभने यहोवा मलाई कत्ति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर महसुस गर्न सक्छु। बाइबल अध्ययन र ख्रिष्टियन सभाहरूबाट पनि यहोवा, उहाँको व्यक्‍तित्व अनि उहाँ हामीबारे कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्‍नेबारे धेरै कुरा सिक्न सकेकी छु। यहोवा हामी प्रत्येकलाई मदत गर्न, माया देखाउन र हाम्रो ख्याल राख्न कत्ति इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर बल्ल बुझेँ।”
हानाले भनेको कुरा साँच्चै प्रोत्साहनदायी छ। तर ईश्‍वरले तपाईँलाई राम्ररी चिन्‍नुहुन्छ र तपाईँको भावना पनि बुझ्नुहुन्छ भनेर कसरी पक्का हुन सक्नुहुन्छ? यसपछिको लेखमा यस प्रश्‍नबारे छलफल गर्नेछौँ।
^ अनु.3प्रसव-उदासीनता (पोस्टपार्टम डिप्रेसन) अर्थात्‌ सुत्केरी अवस्थामा हुने उदासीनता भएका केही आमाहरूलाई आफ्नो बच्चालाई माया-ममता देखाउन गाह्रो हुन सक्छ। तर यसको लागि तिनीहरूले आफैलाई दोष दिनु हुँदैन। अमेरिकाको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार प्रसव-उदासीनता “शारीरिक र भावनात्मक कारणहरू मिलेर हुन सक्छ . . . तर आमाले केही गरेकीले वा नगरेकीले हुने त होइन।” यसबारे थप जानकारी पाउन सेप्टेम्बर ८, २००२ को ब्यूँझनुहोस्‌!-मा प्रकाशित “मैले प्रसव-उदासीनताको सामना गरेँ” शीर्षकको लेख हेर्नुहोस्‌।
^ अनु.5बाइबलमा ईश्‍वरको नाम यहोवा हो भनी बताइएको छ।—भजन ८३:१८.
^ अनु. 15 यी शृङ्‌खलाबद्ध लेखहरूमा केही नामहरू परिवर्तन गरिएका छन्‌।
के ईश्‍वर तपाईँलाई राम्ररी चिन्‍नुहुन्छ?
ईश्‍वरसित हामी र हाम्रो आनुवंशिक संरचनाबारे विशेष ज्ञान छ। यसले उहाँ हरेकलाई राम्ररी चिन्‍नुहुन्छ भनी देखाउँछ।
ईश्वरले दिनुभएको सर्वोत्तम उपहार—किन यति मूल्यवान्‌ छ?
कुनै उपहार कसरी मूल्यवान्‌ साबित हुन्छ? यी कुराहरूबारे मनन गर्दा फिरौतीप्रति तपाईंको कृतज्ञता अझ बढ्‌न सक्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने के ईश्‍वर तपाईँको चासो राख्नुहुन्छ?
“ईश्‍वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो?”
के ईश्‍वर समानुभूति देखाउनुहुन्छ?
दुःखकष्ट—के ईश्‍वरले दिनुभएको सजाय हो?
कसले गर्दा दुःखकष्ट भोग्नुपरेको हो?
ईश्‍वरले छिट्टै सबै दुःखकष्ट हटाउनुहुनेछ
ईश्‍वरमाथि भरोसा राख्दा कस्तो फाइदा हुन्छ?
तपाईँले दुःखकष्ट भोग्दा ईश्‍वरलाई कस्तो लाग्छ?
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा के ईश्‍वरले तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा के ईश्‍वरले तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ?
के ईश्‍वरले तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ?
प्रहरीधरहरा के ईश्‍वरले तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ?